Beertone Imibala Yamabhiya Eshintshayo - Umagazini Design
Imibala Yamabhiya Eshintshayo
Imibala Yamabhiya Eshintshayo IBeertone yisiKhombandlela sokuqala seBeer Reference esekwe kwimibala ehlukile yobhiya, eyethulwa ifeni le-ingilazi. Ngohlobo lokuqala siqoqe imininingwane kusuka kubhiya abangu-202 abahlukahlukene, sazungeza izwe, sisuka eMpumalanga siye entshonalanga, sisuka eNyakatho saya eningizimu. Inqubo yonke yathatha isikhathi esiningi kanye nemininingwane eningiliziwe yokwenza kodwa umphumela walokhu kuhlangana kabili kusenza siziqhenye kakhulu futhi okunye ukuhlela sekuhleliwe. Halala!
Igama lephrojekthi : Beertone, Igama labaklami : Alexander Michelbach, Igama leklayenti : Beertone.
Imibala Yamabhiya Eshintshayo Alexander Michelbach Beertone